Arịọrọ M Jehova Ka O Nyere M Aka Ime Mkpebi Dị Mma | Tamazi Biblaia
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1954
ONYE Ọ BỤ O so na-ebiri anyị akwụkwọ na nzuzo. O sokwa ná ndị nlekọta sekit mbụ e nwere na Jọjia. O ji ụmụ anọ mgbe ahụ.
EZIGBO iwe were mama m mgbe mụ na Tsitso nwunye m ghọrọ Ndịàmà Jehova. Otu ụbọchị, ọ kpọkọtara ndị ikwu anyị niile ka ha gwa anyị okwu. O chere na ha ga-emeli ka anyị ghara ịbụzi Ndịàmà Jehova. Ha gwara m na ọ bụrụ na akwụsịghị m ịbụ Onyeàmà Jehova, na agaghị m abụzi nwa ha.
M kpebiri na m ga-esi n’ụlọ anyị kwapụ. Ebe ọ bụ na ọrụ m bụ ịkpụ ụ́zụ́, m kpebiri na m ga-akwaga n’obodo Kutaịsi, bụ́ obodo nke abụọ kacha buo ibu na Jọjia. Otu n’ime ihe mere m ji chọọ ịkwaga ebe ahụ bụ na ọ bụ ebe m ga-enweta ọrụ ngwa ngwa. Ihe ọzọ abụrụ na a chọkwuru ndị na-ekwusa ozi ọma n’obodo ahụ. N’ihi ya, arịọrọ m Jehova ka o nyere m aka ná mkpebi ndị m mere.
Obere oge ihe a mechara, m hụrụ otu n’ime ndị m na-amụrụ Baịbụl bi n’otu obere obodo a na-akpọ Jivarị. Mgbe ọ nụrụ na m chọrọ ịkwaga Kutaịsi, ọ gwara m ka m bịa biri n’obodo ha. Ọ gwara m, sị: “Anyị nwere ọnụ ụlọ abụọ. Mụ na nwunye m na ụmụ m biri n’otu, gị na nwunye gị ebiri na nke ọzọ.”
Ebe ọ bụ na m rịọrọ Jehova ka o nyere m aka ná mkpebi ndị m mere, m gwara onye ahụ m na-amụrụ Baịbụl na m ga-abịa biri n’obodo ha ma ọ bụrụ na mụ achọta ọrụ na ebe anyị ga-ebi ozugbo. Ọ tụrụ m n’anya ná mgbede ụbọchị ahụ na ọ bịaghachiri gosi m ụlọ ọrụ ndị chọrọ ndị ọrụ.
Mgbe abalị ole na ole gachara, mụ na ezinụlọ m kwagara Jivarị. N’ụbọchị anyị kwagara ebe ahụ, enwetara m ọrụ a na-akwụ m ezigbo ụgwọ. Onye were m n’ọrụ nyere m ụlọ ná nnukwu ụlọ ụlọ ọrụ anyị nwe. Obere oge anyị kwafechara, ụmụnna gwara m ka a nọrọ n’ụlọ m na-ebi akwụkwọ anyị. Ebe ọ bụ na anyị nwere ohere n’ụlọ anyị, mụ na nwunye m kwetara.
Ọ bụkwa n’ụlọ anyị ka a nọ na-enwe Ncheta Ọnwụ Jizọs na nnọkọ ndị ọzọ ruo ọtụtụ afọ. A nọkwa n’ụlọ m mee ihe karịrị narị mmadụ ise baptizim. Obi dị m ezigbo ụtọ na Jehova nyeere m aka ná mkpebi ndị m mere, nakwa na m mere ihe ọ chọrọ.